पोखराको बुलौदीमा दुर्घटना ग१०प ८१०१ स्कुटर चालकको मृत्यु. – Sabaikoaawaj.com
पोखराको बुलौदीमा दुर्घटना ग१०प ८१०१ स्कुटर चालकको मृत्यु.
आइतवार, चैत्र २७, २०७३ 9:54:53 PM	मा प्रकाशित
पोखरा, २७ चैत /पोखराको बुलौदीमा ग१०प ८१०१ नम्बरको स्कुटर दुर्घटना हुदा एकको मृत्यु भएको छ भने एक जना घाइते भएका छन् । आइतबार बिहान भएको दुर्घटनापरी पोखरा ७ बस्दै आएका १४ वर्षिय आविस्कार पराजुलीको ज्यान गएको छ । दुर्घटनामा परि नमस्ते चिल्डेन होममा बस्ने १६ वर्षिय धिरज तामाङ घाइते भएका छन् ।
दुर्घटनामा परी गम्भीर घाइते आविस्कारको पोखराको गण्डकी मेडिकल केलजमा उपचारका क्रममा ज्यान गएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । जरेवरबाट जिरो किलोमिटर तिर जादै गरेको स्कुटर विजुलीको पोलमा ठोकिएर दुर्घटना भएको थियो ।
हेल्मेट समेत नलगाइ चलाएका कारण चालक बढि घाइते हुन पुगेको प्रहरीको भनाई छ । मृतक आविस्कार सवलाईन बोडिङस्कुलमा कक्षा ९ मा अध्ययनरत थिए । ठुली आमाको छोरा दाईको क्याम्पस गएको बेलामा स्कुटर लिइर उनी हिडेका थिए । एक्ला सन्तान रहेका आविस्कारका बाबु आमा दुबै आसिंक अपांग छन् । बाबु तरकारी बेच्ने काम गर्दछन् भने आमा फलफुल बेचेर जिविन चलाउदै आएका छन् ।
प्रकाशित मितिः आइतवार, चैत्र २७, २०७३ 9:54:53 PM